Sekumi ngomumo kowa-Miss Mgungundlovu | News24
Sekumi ngomumo kowa-Miss Mgungundlovu
uBusiswa Mkhize wase-Edendale owadla umhlanganiso ngonyaka ophelile.ISITHOMBE: sithunyelwe
UPHINDE wakhuza ibuya uzime omkhulukazi owaziwa ngokuthi u-Miss Mgungundlovu.
Lo zime uhlelwe Intabayabantu kanye neSpiral Modelling Agency.
Ngokusho kukaMnuz Mbuso Nyandu ongumsunguli weNtabayabantu Modelling Agency uthe lo zime uzoqale uhlunge abazoba kowamanqamu mhla ka-4 kuNcwaba (August) emtwapweni wolwazi i-Bessie Head Library kusuka ngo 9 ekuseni.
Umncintiswano omkhulu wamanqamu uzoba ngoMgqibelo mhla ka-29 kuMandulo (September).
Uthe izintokazi ezizohlungwa zizobe sezilwela isicoco nomklomelo wemali elinganiselwe ku-R15 000.
Ukungenela lo mncintiswano u-R150 umuntu ngamunye kanti izingane ezineminyaka esuka kweyi-8 kuya phezulu zamukelekile ukuthi zingangenela.
“Kulo mncintiswano silindele izintokazi eziphuma komasipala abahlukene abangaphansi kwesiFunda soMgungundlovu kanti lo mcimbi uzoba seqophelweni eliphezulu uma uqhathanisa nemicimbi yangaphambilini.
“Njengoba senza imicimbi efana nalena ingoba sifuna ukuhlanganisa intsha ndawonye ngento ezoyikhulisa iphinde iyifundise nokuziphatha. Intsha eningi kwaziwa ukuthi ihlangana uma uma yenza izinto ezingalungile, sifuna ukushintsha lokho. Sifuna bahlangane ngezinto ezinhle bakwazi ukufundisana ,” kubeka yena.
Ngeminye imininingwane egcwele ungaxhumana noMnuz Nyandu ku 071 505 0738.